About us - Binzhou Chengli zokwakha Co., Ltd.
I-Binzhou Chengli Building Materials Co., Ltd.isendaweni enhle ye-Yellow River Delta Center City-Binzhou, enyakatho neChina. inkampani yethu ngobuchwepheshe ezikhethekile inqubo ukukhiqizwa, ucwaningo, ukuthuthukiswa, kanye nokuthengisa admixtures ukhonkolo.
I-Binzhou Chengli Building Materials Co., Ltd. ihlanganisa indawo engama-38.53 mu, enamamitha-skwele angama-25086 ekwakheni indawo namamitha-skwele angama-600 ocwaningo lwesayensi nelebhu. sesakhe umugqa ophelele wokukhiqizwa kukakhonkolo, ukuhlaziywa kwamakhemikhali kanye nelebhu yempahla yomzimba eneShandong University, ifakwe izinsimbi zesimanje zokulinganisa nokuhlola izinsimbi nemishini emikhulu.
Inkampani yethu ineqembu elinamandla lokucwaninga nentuthuko eliqukethe odokotela abangochwepheshe, amakhosi weShandong University.our imikhiqizo eyinhloko: i-polycarboxylate superplasticizer liquid ne-powder, i-sodium naphthalene sulfonate formaldehyde, i-aliphatic superplasticizer, i-sodium / calcium lignosulfonate, i-sodium gluconate, i-antifreeze, i-accelerator, i-defoamer , i-ejenti yokufaka umoya, njll.
I-Binzhou Chengli Building Materials Co., LTD ihlala inamathela kukhwalithi njengesisekelo, emisha njengamandla, futhi ilwela ukuhola ukhonkolo umholi wemboni. Ubuqotho benkampani yethu, amandla nekhwalithi yomkhiqizo uthola ukwamukelwa kwemboni Umphathi ojwayelekile nabo bonke abasebenzi enkampanini bamukela abangani abavela kuzo zonke izizinda zokuvakasha, ukuholwa kanye nokuxoxisana ngebhizinisi.